ရှေးဦးသူနာပြု စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - China First Aid ထုတ်လုပ်သူများ
အရည်အသွေးမြင့် အမြန်ပို့ဆောင်မှု ရှေးဦးသူနာပြု ပတ်တီး
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 1.Car/Vehicle first aid ပတ်တီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကား ရှေးဦးသူနာပြုကိရိယာအစုံသည် စမတ်ကျပြီး ရေစိုခံကာ လေလုံကာ အိမ်တွင်ဖြစ်စေ ရုံးမှထွက်ခွာပါက သင့်လက်ကိုင်အိတ်ထဲသို့ အလွယ်တကူထည့်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ရှိသော ရှေးဦးသူနာပြုပစ္စည်းများသည် သေးငယ်သောဒဏ်ရာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး၊ နာကျင်စေတယ်။2. လုပ်ငန်းခွင် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း ပတ်တီး မည်သည့်လုပ်ငန်းခွင်တွင်မဆို ဝန်ထမ်းများအတွက် ကောင်းမွန်သော ရှေးဦးသူနာပြုကိရိယာအစုံ လိုအပ်ပါသည်။ဘယ်ပစ္စည်းထည့်ရမယ်ဆိုတာ မသေချာဘူးဆိုရင်တော့ ဒီကနေဝယ်လို့ရပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ဤသတ္တုပြားကယ်ဆယ်ရေးစောင်သည် အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ခန္ဓာကိုယ်အပူထိန်းနိုင်စေရန် ကူညီပေးသည်၊ ရာသီဥတုအခြေအနေအားလုံးတွင် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အရေးပေါ်ကာကွယ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်၊ ခန္ဓာကိုယ်အပူ၏ 90% ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်၊ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသော၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်၊ တစ်ခါသုံး၊ ရေစိုခံပြီး လေဒဏ်ခံနိုင်သည်။ပစ္စည်း PET ကိုလည်း အရေးပေါ် စောင်အရောင် ရွှေငွေ/ငွေ လျှောဟု အမည်ပေးထားသည်။အရွယ်အစား 160x210 စင်တီမီတာ၊ 140x210 စင်တီမီတာ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား လုပ်ဆောင်ချက်သည် လေဒဏ်ခံ၊ ရေစိုခံပြီး အအေးဒဏ်ခံနိုင်သော အရွယ်အစားများနှင့် ပက်ကေ့ချ် ငါ...
အိမ်သုံး ခရီးသွားအားကစားအတွက် အရောင်းရဆုံး ရှေးဦးသူနာပြုကိရိယာအစုံ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ဖော်ပြချက် 1.Car/Vehicle First Aid Kit ကျွန်ုပ်တို့၏ကား ရှေးဦးသူနာပြုကိရိယာများသည် စမတ်ကျပြီး ရေစိုခံကာ လေလုံကာ အိမ်မှထွက်ခွာပါက သင့်လက်ကိုင်အိတ်ထဲသို့ အလွယ်တကူ ထည့်ထားနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ရှေးဦးသူနာပြုပစ္စည်းများသည် အသေးစားဒဏ်ရာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ နာကျင်တယ်။2. အလုပ်ခွင် ရှေးဦးသူနာပြုကိရိယာ မည်သည် လုပ်ငန်းခွင်တွင်မဆို ဝန်ထမ်းများအတွက် ကောင်းစွာသိုလှောင်ထားသော ရှေးဦးသူနာပြုပစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသည်။ဘယ်ပစ္စည်းတွေထည့်ရမယ်ဆိုတာ မသေချာဘူးဆိုရင်တော့ ဒီကနေဝယ်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်...